Ireo sekretera jeneralin'ny Donald Trump - Lisitra sy Bios
Ireo sekretera Presse an'ny Donald Trump
Lisitra sy Biôse an'ny Mpitondra tsirairay ho an'ny Filoha faha 45
Ny sekretera Donald Trump dia Sean Spicer, tale mpanelanelana taloha ary mpitari-tolona lehibe ho an'ny Komitim-pirenena Repoblika. Ny filoham-pirenena faha-45 antsoina hoe Spicer dia manomboka amin'ny 22 desambra 2016, tokony ho iray volana talohan'ny nanaovany ny fianianana .
Spicer, mpitondra tenin'ny Eglizy lava indrindra ho an'ny RNC ary nofaritana ho toy ny "tanana antitra" ao anatin'ny Washington Beltway, dia manakiana matetika ny fandrakofan'ny haino aman-jery malaza momba ny Trump sy ny politika amin'ny ankapobeny. "Diso foana ny fitantaràm-pahefana ary izany dia mampihorohoro", hoy i Spicer teo am-piandohan'ny fotoana maha-sekretera azy ho sekretera Trump.
Ny sekretera mpitantsoratry ny gazetiboky White House dia ny fifandraisana eo amin'ny filoha sy ny media vaovao. Ny Spicer dia tompon'andraikitra voalohany amin'ny fifampiraharahana amin'ny mpanao gazety ao amin'ny Trump White House. Izy no sekretera voalohany an'ny Trump, ary tsy dia izy no hany sekretera. Ny asa dia mangataka mafy, ary maro ny filoham-pirenena no mandalo maromaro mandritra ny fotoam-pitsarana azy ao amin'ny Trano Fotsy. Mpialoha lalana Tromp, Democrat Barack Obama, dia nanoratra sekretera telo nandritra ny fe-potoana roa tao amin'ny birao , ohatra.
Sean Spicer, sekreteran'ny White House Gazety, dia mitory amin'ny mpanao gazety mandritra ny fotoana fohy amin'ny 2017. Win McNamee / Getty Images
Spicer dia mpandraharaha ara-politika efa za-draharaha izay niasa tamin'ny Antoko repoblikana matetika izy na dia talohan'ny toerany tao amin'ny Trump White House aza. Tsy mbola nitovy amin'ny Trump ihany koa izy momba ireo olana sasany manan-danja, saingy nanomboka nitokisany tamin'ny mpandraharaha mpanankarena .
Nandritra ny resadresaka niarahan'ny WPRI tamin'ny fahitalavitra fahitalavitra, dia nilaza i Spicer fa "nikarakara sy nankahery" i Trump ary nilaza fa iray amin'ny tanjony amin'ny maha-sekretera mpanao gazety azy no manolotra izany faran'ny filoham-pirenena izany ho an'ny Amerikana. Ny fampiasan'i Trump ny Twitter hifandraisana amin'ny olom-pirenena , hoy i Spicer: " Mampita hafatra amin'ny fomba lehibe kokoa noho ny hatramin'izay izy , ary heveriko fa ho tena ampihetseham-po amin'ny asa io."
Niteny tamin'ny gazety Providence Journal ao Rhode Island ny reny Spicer fa ny zanany lahy dia voafatotry ny politika amin'ny fahazazany. "Namboly ny taom-pianarany tao amin'ny sekoly ambaratonga faharoa ny voany, tampotampoka teo dia voatsindrona izy," hoy izy.
Job teo aloha
Febroary 2011 hatramin'ny 2016 : Talen'ny serasera ho an'ny Komitim-pirenena repoblika. Ny Spicer koa dia niasa ho mpitari-draharaha lehibe indrindra ao amin'ny antoko; Izy no mpanelanelana voalohany tamin'ny fifanakalozan-kevitra tamin'ny adihevitra voalohany tamin'ny 2016.
Jolay 2006 ka hatramin'ny Janoary 2009 : solontenan'ny solontenan'i Etazonia ho an'ny haino aman-jery sy ny raharaham-bahoaka eo ambany fitarihan'ny Filoha George W. Bush.
Mey 2005 hatramin'ny volana jolay 2006 : talen'ny fifandraisana ho an'ny Kaongresin'ny Repoblika House. Ao amin'io anjara andraikitra io, izy dia nanara-maso ny fampiofanana ny media ho an'ny mpikambana ao amin'ny Trano sy ny sekreterany mpanao gazety.
Janoary 2003 hatramin'ny Mey 2005 : Talen'ny serasera ho an'ny Komitin'ny Budget Budget.
2000 : Talen'ny fitazonana am-ponja ho an'ny Komitin'ny Kongresy Nasionaly nandritra ny fifidianana tamin'ny taona 2000. Tao anatin'izany andraikitra izany no nanarahany ny fampielezan-kevitr'ireo mpikambana 220 tao amin'ny trano.
Spicer dia nandroso tamin'ny fanombohan-ketaheta niaraka tamin'ny corps de press White rehefa nilaza izy fa "ny mpihaino be indrindra no nahita ny fanokanana azy". Spicer dia nitaky saripika mampiseho ny fanokafana ny kabarin'i Obama tamin'ny volana desambra dia nahatonga ny olona maro voatery nanala baraka Trump. "Ny sarin'ny fizotry ny famoahana dia nofinofy amin'ny fomba iray, amin'ny sioka iray manokana, mba hampihenana ny fanampiana goavana niangona tao amin'ny National Mall," hoy i Spicer nanambara tao amin'ny gazetiboky White House.
Nanampy i Spicer fa ny fikasany dia ny tsy handainga amin'ny gazety.
Talohan'ny nisafidianan'i Trump azy ho sekretera mpanao gazety, Spicer dia nanakiana ny kandidà amin'ny tsikera nataon'ny Senateran'ny Repoblika amerikana John McCain. Trump dia nanambara tamin'ny volana Jolay 2015 fa "tsy maherifo amin'ny ady i McCain, izay nigadra noho ny ady tany Vietnam." Izy dia mahery fo mpiady noho izy voasambotra, tiako ireo olona tsy voasambotra. "
Spicer, niresaka tamin'ny anaran'ny Komity Nasionaly Repoblikana, dia namaly avy hatrany ny fanehoankevitra Trump: "Senator McCain dia Amerikana maherifo satria nanompo ny fireneny izy ary nanao sorona mihoatra noho ny ankamaroan'ny maro. fanehoan-kevitra izay manimba ireo izay nanompo tamim-boninahitra. "
Spicer koa dia nanakiana ny fanamarihan'i Trump fa nanjary "toeram-pitrandrahana" ho an'ireo mpanao heloka bevava ao Meksika i Etazonia . Hoy i Trump: "Rehefa mandefa ny vahoakany i Meksika, tsy maniraka ny tsara indrindra izy ireo, tsy maniraka anao izy ireo, tsy mandefa anao izy ireo, maniraka olona manana olana maro, ary mitondra ireo olana ireo Manan-drongony izy ireo, mitondra heloka bevava, ary mpanakorontana, ary ny sasany, izay heveriko, dia olona tsara. "
Spicer, miteny ho an'ny Antoko Repoblikana, dia nilaza hoe: "Raha ny filazako ny sary hosodoko Meksikana amin'ny karazana borosy iray, dia heveriko fa mety ho zavatra tsy manampy amin'ny antony izany."
Spicer dia teratany any Barrington, Rhode Island.
Izy dia zanak'i Kathryn sy Michael W. Spicer. Ny reniny no talen'ny Departemanta Studienan'ny Aziatika ao amin'ny Oniversiten'i Brown, araka ny tranokalan'ny oniversite. Maty tamin'ny volana Desambra 2016 i Michael W. Spicer rainy, niasa tao amin'ny orinasa fiantohana.
Spicer dia nahazo diplaoma tao amin'ny Portsmouth Abbey School sy Connecticut College tamin'ny taona 1993 niaraka tamin'ny mari-pahaizana licence momba ny governemanta. Nahazo mari-pahaizana maîtrise avy amin'ny Oniversiten'ireo ady ao Naval izy tao Newport, Rhode Island. Tamin'ny fotoana nanendrena azy dia Spicer dia mpifehy miaramila iray manana traikefa 17 taona ao amin'ny tahiry, araka ny gazety Times.
Manambady izy ary miaina any Alexandria, Virginia.
Kellyanne Conway dia mpanolotsaina trompetra trompetra izay manompo amin'ny maha-mpitondra teny azy ihany koa. Getty Images
Na dia mpitan-tsoratry ny lapan'ny Tromp aza ny Spicer, maro ireo mpanampy lehibe no manompo ho filoham-pirenena. Anisan'izany i Kellyanne Conway, izay mpitantana ny fampielezan-kevitry Trump ary lasa mpanolotsaina ambony indrindra tamin'ny filoha rehefa nandray ny asany izy. Lehiben'ny mpiandraikitra ny trano mendri-kaja Priebus koa dia miteny amin'ny anaran'ny filoha amin'ny andraikitra maha-mpanolotsaina azy.
Izay nataon'ny filoha tamin'ny andro farany nataony tao amin'ny birao
Iza no mpanohitra?
Ny Fifehezana ny zom-pirenena amerikana sy ny fanekena ny lalàm-panorenan'i Etazonia
Firaketana ny isan'ireo veteranina mahazo asa fitondrana
Iza no filoha nanendry ny fitsarana ambaratonga ambony indrindra?
Toeram-pialan-tsasatra veteran available online
Fihetseham-po mahatsikaiky momba ny jirafy
Bigfoot Videos Sasquatch, Yeti ary Skunk Ape
Top 10 mpikatroka mafàna fo vehivavy
Inona no atao hoe Anagrama?
Teny nalaina avy tany Alice tany Wonderland
Ahoana ny fomba hananganana kodiarana mipetaka manga ho an'ny Copper Copper
Ny fiteny N'ko an'ny Souleymane Kante
Angel Prayers: Mivavaka amin'ny arkanjely Metatron
Manoro boky tsara ho ahy
Galileo Galilei Teny nalaina
'Sense and Sensibility' Teny nalaina
Inona ny fanambarana Java?
Famindrana hafahafa sy tsy misy dikany amin'ny teny alemana
Famoronana fifandraisana amin'ny Microsoft Access 2007
Ny famonoana ny Malcolm X
Ny fambolena efa antitra - Konzepika, teknika, ary ny arkeolojia
Ny momba ny Pentekosta ao amin'ny Fiangonana Katolika
Mpanao ady totohondry taloha / misotro ronono
Ny momba ny cartridges CO2 sy ny solosaina ho an'ny kodiaranao
Ahoana ny fiezahana hifanakalozan-kevitra amin'ny tetikasa momba ny siansa
Inona no atao hoe Feng Shui? Ahoana ny fifandraisan'i Feng Shui amin'ny Architecture?
Jazam-pandrosoana Jazz ho an'ny Jazz Dancers